I-Aula de Escritores, isikolo esingoovulindlela se-Barcelona | Uncwadi lwangoku
I-Aula de Escritores, isikolo soncwadi esise-Barcelona
Unyaka omtsha uyasondela, kwaye ngezigqibo ezintsha. UStephen King wakhe wathi: «Ukuba ngumbhali, into yokuqala kukwenza izinto ezimbini: funda okuninzi kwaye ubhale okuninzi. Andazi nangayiphi na indlela yokujikeleza ». Isizathu siyasilela, kodwa soze kubuhlungu ukuba nesiseko esiqinileyo noko. Kulapho izikolo zoncwadi zidlala khona.
Namhlanje sibonisa isikolo sase-Aula de Escritores, isikolo sokuqala e-Barcelona. Eyasungulwa ngo-1995 nguLluc Berga kwaye isentliziyweni yeGracia, esi sikolo sizenzele njengenye yezona zinto zibaluleke kakhulu e-Barcelona.
U-Aula de Escritores wayenguvulindlela kule nkalo, kwaye unyaka nonyaka benza izinto ezintsha kwaye benza iiprojekthi ezintsha. Ngaphezulu kweminyaka elishumi isikolo besineendawo zokupapasha, Inqaku lomhleli uHijos del Hule kunye noHlelo lweCronos, eyokugqibela ijolise kupapasho lwe desktop.
2 Iikhosi kunye nootitshala:
3 IHijos del Hule kunye neCronos yoHlelo:
4 Iiprojekthi zakho:
5 Nxibelelana neklasi yaBabhali:
Esi sikolo semfundo asinamsebenzi wodwa wokufundisa ngeendlela zokubalisa kodwa, ngokungafaniyo nezinye izikolo, ikhuthaza ukugxeka. Kwaye oku, nangona kubiza imali encinci ukwenza izinto ekuqaleni, yinto ebalulekileyo ukuze sikwazi ukuqhubela phambili kwaye sifunde kwiimpazamo zethu. Ukuqhubeka nokufunda kunye nokuzimisela zizinto eziphambili kuqeqesho olunikezelwa sisikolo.
Kulabo kuni abangahlali eBarcelona okanye abangakwaziyo ukuya emntwini ngenxa yexesha, uAI-ula de Escritores ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokusebenzela kunye nezifundo online. Zombini kwizifundo zobuso ngobuso kunye nezo zenziwayo online, eyona nto ibaluleke kakhulu ekufuneka ibalaselisiwe kukuzinikela kwabasebenzi bokufundisa. Ngexesha lezifundo, abahlohli banentsingiselo epheleleyo kwinyathelo ngalinye elithathwa ngumfundi.
Kodwa oku kuzinikela sithetha ngako akupheleli apho. Mhlawumbi elinye lawona manqaku avuzayo kubafundi kukubona umsebenzi wabo upapashwa. Qho ngonyaka, isikolo sibonisa i-anthology ngamabali amahle abafundi. Into engathandabuzekiyo, uninzi lwezikolo zoncwadi ezingafundisiyo.
Iikhosi kunye nootitshala:
U-Ana Marín, u-Ignacio García, uGemma Solsona kunye no-S Lanchares, baphethe iimfundiso ezahlukeneyo ezenziwa sisikolo. Nangona ezona ziphumeleleyo zizifundo zokubhala kunye nezibalisayo, Sinokufumana amabali amafutshane, imibongo, iinoveli, imidlalo yescreen kunye nezifundo zokupapasha kunye nedesktop. Njengoko ubona, isithembiso sigqibezele kwaye ixabiso lemali lingaphezulu kokwaneleyo.
IHijos del Hule kunye neCronos yoHlelo:
Njengoko besesitshilo ngaphambili, I-Aula de Escritores inayo indlu yayo yokupapasha ngaphezulu kweminyaka elishumi, kwaye oku kuluncedo olukhulu. Nokuba uthathe ikhosi esikolweni okanye hayi, umpapashi unika iingcebiso kunye neepakethe ezahlukeneyo zokupapasha incwadi yakho. Nangona kunjalo, inkonzo ithetha uxolo olukhulu lwengqondo, ngakumbi abafundi. Inyani yokukwazi ukubala abantu abakukhaphe kuyo yonke inkqubo, isinika ukhuseleko ekusenokwenzeka ukuba besingayi kuba nalo ngokwethu.
Amathuba anikezelwa ngaba bapapashi maninzi. Ukusuka kuphononongo lombhalo obhaliweyo, ubeko, ukupapashwa kweekopi ezahlukeneyo, ukuhanjiswa kwiivenkile ezithengisa iincwadi kulo lonke elaseSpain nakwiivenkile ezibonakalayo kunye nemiboniso kunye nokuma eSant Jordi (umnyhadala wengingqi ohlawula incwadi). Ezi zezinye zeenkonzo, kodwa ungafunda ngononophelo kwiwebhusayithi yazo iipakethi ezinikezelwa ngeendleko zazo eziqhelekileyo. Ukufumana umbono, indleko zokuzipapasha malunga nekhulu lekopi kunye nazo zonke iinkonzo ezibandakanyiweyo zingasondela kuma-euro angama-700. Ixabiso elingaphezulu kwexabiso elifanelekileyo kuzo zonke iinkonzo abazinikelayo
Phakathi kwezinye izinto, isikolo okwangoku sisebenza kwi iprojekthi edibeneyo neYunivesithi yaseBarcelona ukupapasha incwadi yamabali ebhalwe ngabafundi bale yunivesithi kwaye inxulumene namalungelo oluntu. Enye injongo eqhubekayo esinokuyonwabela kunyaka ozayo kukuba nokubamba imincintiswano evulelekileyo kuye wonke umntu. Aba baya kuba nabafundi bangaphambili njengejaji.
Njengoko ubona, iAula de Escritores sisikolo esisebenzayo, esibandakanyekayo kwaye esivulekileyo kumanyathelo amaninzi okusebenzisana.
Ke ukuba enye yeenjongo zakho kulo nyaka uzayo yayikukuyila ubuchule bakho, awusenaso nesizathu sokuba ungayenzi.
Nxibelelana neklasi yaBabhali:
C / Sant Lluís nº 6, kumgangatho ophantsi, Barcelona
NgoLwesibini ukuya kuLwesine ukususela ngo-18: 00 emva kwemini ukuya nge-22: XNUMX ebusuku
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » I-Aula de Escritores, isikolo soncwadi esise-Barcelona
Iinoveli zam ezi-4 zolwaphulo-mthetho ezivela kwi2016 zithetha isiFrentshi, isiNorway, isiFinnish kunye nesiTaliyane.
Iindaba zoncwadi Seix Barral: Matshi 2017